Laxer OS, Arch Linux neGnome iyo isingatsvake zviwanikwa zvakawanda uye kutaridzika kwakanaka | Kubva kuLinux
Laxer OS, Arch Linux neGnome iyo isingade zviwanikwa zvakawanda uye kutaridzika kwakanaka
Kana iwe uri kutsvaga kuyedza Arch Linux asi pasina chikonzero chekufamba kuburikidza negadziriro yekumisikidza Izvo zvevatsva kuLinux zvinogona kuve zvakaoma kana iwe uchingoda kuzvichengetera imwe nguva mukuita, rega ndikutaurire kuti panguva yekutsvaga mambure ndakasangana nekuziviswa kwekutanga kwekuparadzirwa kweLinux kutsva kwakandibata.
Laxer OS ndiko kugovera kwatichataura nezvazvo muchinyorwa chino uye yandinogona kukurudzira kune avo vanoda kuyedza Arch Linux pasina kukosha kwekuita kwayo kwese tsika yekumisikidza maitiro.
Uye kana ini ndichizivawo kuti vazhinji vachati, nekuti iyi Manjaro, Arco Linux, nezvimwe, nezvimwe. Asi zvakanaka Ini ndinofanira kuti iyo system yakakodzera kuyedzwa izvi kuitira kuti iwe ugone kuziva iyo system uye zvakare iwe unogona kuona kana kwenzvimbo yako yakagadzikana zvakakwana kuti ugone kushanda pairi.
Nei ini ndichikuudza izvi, ndezve chikonzero chiri nyore chekuti vashanduri vayo vachiri kuisa kugovera se "semi-solid" vhezheni saka kuti iidane (kana muchikamu chekuyedza kana iwe uchinzwa kugadzikana).
Chaizvoizvo Laxer OS inoparadzanisa uye yakapusa kugovera kweLinux yakagadzirirwa kusangana nezvinodiwa zvevashandisi uye vanokwanisa Linux vashandisi. Iine simba, zviri nyore kubata nekuisa, ichiigadzira chimiro chakanakira mashopu nemalaptop.
Mune iyo posvo vanogovana zvinotevera:
Mune ino vhezheni, isu taedza nepese patinogona napo kuvandudza mashandiro ese ehurongwa, sezvo isu takavakirwa paArch Linux, zvakaoma kwazvo kuwana kugadzikana kweiyo inoshanda sisitimu nekuda kwekuenderera mberi kwekuvandudza uye kuenderera kunovandudzwa, asi mune yekupedzisira vhezheni Nhasi tinogona kukuvimbisa kuti yedu sisitimu yakanyatsogadzikana uye yakagadzirira kuve mutongi wako wezuva nezuva, kunyangwe iwe ukaiisa pane laptop kana desktop uye kunyangwe iwe ukashandisa UEFI firmware kana grub, isu tinotsigira zvese.
Kuburitswa uku ndiko kuburitswa kwekutanga kweLaxer OS, isu takasiya akawanda maficha mune ino kuburitswa senge "gnome dhizaini dhizaini" uyezve takabvisa vazhinji vakaronga kutumira gnome extensions. Yedu huru yekutarisa kuburitswa uku kwaive kukuunzira kugadzikana uye kupunzika. Yemahara inoshanda sisitimu yekushandisa zuva nezuva.
Iye zvino Laxer OS iri mushanduro yayo 1.0 inouya neiyo GNOME desktop nharaunda uye inotarisa mukugadzira, kumisikidza uye kushanda pachirongwa sezviri nyore sezvinobvira.
Iyi vhezheni yekutanga yainyanya kutarisana nekupa yakagadzikana fomati yakakodzera mashandisiro ezuva nezuva, mukuwedzera kune iko kunodiwa mashandiro akarongwa mune ramangwana, i.e. zvakarongerwa kuwedzera interface kuti ikurumidze kuchinja marongero edesktop.
Nezve izvo zvinodiwa izvo zvinodiwa Kuti ugone kumisikidza uye kumhanyisa iyo system pakombuta yako, unofanirwa kunge uine zvinotevera:
Chete 1 GB ye RAM
64GZ 1-bit processor
10 GB yeakaomesesa dhiraivhu nzvimbo.
Nezvinodiwa izvi ndinofanira kutaura kuti iwe uchashanda zvishoma, asi iri zano rakanakisa kumhanyisa system isingade zviwanikwa zvakawanda pakutanga uye tinogona kugovera zvimwe zvese zvishandiso zvedu kune edu mashandiro nemitambo.
Nezve izvo zvinokurudzirwa zvinodiwa:
2 GB ye RAM
30 GB yeakaomesesa dhiraivhu nzvimbo.
Ukuwo, maererano nemaapplication atinogona kuwana Firefox, LibreOffice, Flatpak, yay, ffmpeg, Gnome, GDM, hashcat, GIMP, Gparted, pakati pevamwe.
Dhawunirodha Laxer OS
Kana iwe uchifarira kugona kuyedza kana kuisa kugovera uku yeLinux iwe unogona kuwana iyo system mufananidzo muchikamu chekurodha cheayo webhusaiti yepamutemo kana nekuenda ku kune inotevera chinongedzo.
Finalmente kune avo vanofarira kuziva zvakawanda nezvazvo nezve kugoverwa kweLinux pamwe nekutsvaga iyo yekumisikidza gwaro, unogona kuwana rumwe ruzivo pane webhusaiti yekuparadzira. Iyo yekubatanidza ndeiyi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Laxer OS, Arch Linux neGnome iyo isingade zviwanikwa zvakawanda uye kutaridzika kwakanaka
Inotaridzika kunge inonakidza.
Chii chandiri kufarira EndeavorOS kana Kuberekwazve.
kuberekwa patsva kunoratidzika kunge kwakanaka. Izvo zvinoshandisa yakawanda zviwanikwa? ye4gb yegondohwe zvichave zvakanaka ndinofungidzira. Ndiri kuzoyedza, ndatenda-
Izvo zvinongedzo kune kurodha pasi uye yepamutemo peji reprojekiti zvakaputswa.
GeckoLinux 152 inosvika yakavakirwa pane yakavhurikaSUSE Leap 15.2 uye neshanduko idzi
Iyo wxWidgets 3.1.4 GUI yekuvandudza kit iri pano uye hezvino izvo zvitsva